Kitapo miloko mibontsina mipoitra ho an'ny fanoratana ny loko China Manufacturer
Description:Pikantsary mipetaka miloko mena,Kitapo miloko mavo,Be Glass Glasses
Home > Products > Hazo fanondronam-bolo > Kitapo miloko mibontsina mipoitra ho an&#39;ny fanoratana ny loko
Mandritra ny dingan'ny asa an-dàlana, dia manjelanjelatra ny rindrin'ny gorodona eo amin'ny làlan-dàlana nosoratana tamin'ny loko thermoplastika izay hafanana ho an'ny sasany raha mbola mafana ny loko, ka hampitombo ny fandinihana ny lalana. Araka ny filazalazan'ny Standard Industry Communication an'ny Repoblika Entim-Bahoakan'i Sina ny JT / T446-2001, ny granulometry ho an'ny latsa-bato amin'ny glasa dia hita ao amin'ny tabilao etsy ambany:
Ny fijerin'ny hafa dia mitandrina ny karazana intermix.
Pikantsary mipetaka miloko mena
CHIYE GLASS BEAD (HEBEI) CO., LTD dia hita ao amin'ny tanànan'i Langfang izay 100 kilaometatra lavitra an'i Tianjin Port, 50 kilometatra lavitra ny afovoan'i Beijing ary 10 kilaometatra lavitra ny seranam-piaramanidin'i Beijing No.2. Ny seranana dia eo akaikin'ny làlana roa an'ny Jingtai sy Langzhuo. Ny fambolena tsy manam-paharoa sy ny fitaterana rano madio dia mametraka fototra mafy orina ho an'ny fampandrosoana an'i Chiye.
Ny CHIYE GLASS BEAD (HEBEI) CO., LTD dia natsangana tamin'ny taona 1998. Nandritra ny fitarihana ny filoha Wenjie Liu sy ny ezaka tsy nitaky ny mpiasa rehetra, dia namboarina avy amina orinasa tsy miankina iray ho perla vita amin'ny perla glass. Ny orinasa dia manana orinasa famolavolana tetikasa mihoatra ny 38, fa tsy ny singa voalohany tamin'ny vokatra 200.000MT. Ny fitaovana fametrahana stereo ho an'ny stereo lehibe indrindra, rafitra feno automatique, rafitra sy famolahana, dia tanteraka tanteraka ny famokarana sy ny fitantanana automatique. Ny orinasa dia manana ny laboratoara fikarohana tanteraka indrindra ary afaka manatanteraka tsy tapaka ny endriky ny fanandramana finday rehetra mba hamenoana ny teknolojia vaovao sy ny vokatra vaovao.
Mitondra fanamafisana sy fanohanana goavana i Chiye, ho an'ny ezaka amin'ny fijinjana, ho an'ny fahamendrehan'ny laza, ho an'ny orinasa goavana ho an'ny andro mendri-piderana be voninahitra, hiantsorantsika am-pahaizana vahiny sy vahiny mba hitsidika ny orinasa ary i Chiye dia maniry ny hiara-hiasa aminao ary hahazo ny ho avy.
High Roundness High Glass Reflective Quality Contact Now
High Roundness Heavy Metal Reflective GlassBeads Contact Now
High Roundness Glass Beads Contact Now
Porofom-bato lehibe ho an'ny fiarovana ny seranana Contact Now
Porofom-peo lehibe ho an'ny marika Contact Now
High Glass Glasses Reflective Performance Contact Now
Porofom-bozaka avo lenta ho an'ny Roadmarking Contact Now
Kitapo mivalona miresaka momba ny famantaran-dalana Contact Now
Pikantsary mipetaka miloko mena Kitapo miloko mavo Be Glass Glasses Pikantsary mibontsina miloko marevaka Pikantsary miloko melt Kitapo fisaka mipetaka miloko mena Pikantsary marevaka matevina Pikantsary vita amin'ny melonina miloko manga